Iyo yakanakisa Multiplayer Mitambo yeAroid
kudzidziswa » Mitambo » Iyo yakanakisa Multiplayer Mitambo yeAroid
Kutamba mitambo yevazhinji panharembozha dzanhasi kwave kunakidzwa nevakawanda vedu. Pose patinenge tine nguva yekusununguka kana kuti tinoda kuzorora kwekanguva uye kubvisa misoro yedu, tinowanzovhura mitambo yedu yepaIndaneti yeIndaneti kuti titange kutamba. Ndiani asati azviita?
Zvisinei, kunakidzwa kunowedzera kana tine mukana wekutarisana neshamwari dzedu mumitambo yakasiyana-siyana yekuita yatinogona kuwana mumitambo yeAroid.
Kutamba vatambi vakawanda chiitiko chakasiyana uye chiri kukura pane Android nhare. Mumakore matanhatu apfuura isu takakwanisa kupupurira shanduko inoshamisa nekuonekwa kwemitambo ine graphic level yakafanana nemaconsoles.
Mitambo yekutamba online neshamwari
Ivo vakashanduka zvakanyanya zvekuti kune akawanda uye akawanda emitambo sarudzo dzekutamba neshamwari online. Nekudaro, pakati pemazita akawanda anowanikwa muzvitoro zvakasiyana siyana zvepamhepo, isu tichaita runyoro rweakanakisa mitambo yevazhinji kuita kuti zvive nyore kusarudza iyo chaiyo inoita kuti tive nenguva yakanaka.
Kune akawanda Android mitambo yevanhu vaviri kana kupfuura kwaunogona kupikisa shamwari dzako kana timu yakatarisana pamwe chete neshamwari dzako. Kana iwe uchitsvaga akanakisa evazhinji mitambo yeAroid yekutamba neshamwari dzako, heino runyorwa rwemitambo yedu inoshanda newaya internet, Wi-Fi kana Bluetooth, uye inogona kutorwa mahara pafoni yako yeAroid kana piritsi.
Ice Age Musha
Uyu mumwe wemitambo yekubatana neshamwari ine yekuvakisa simulator uko chinangwa chako chiri kuvhura uye kuvaka dzimba nyowani dzevaratidziri vefirimu Ice Age.
Iwo mutambo wausingazowane akawanda matambudziko, uye zvakare ari intuitive, nekuti kana iwe wakaona iyo bhaisikopo, iwe unozoziva vese mavara.
Kana iwe ukatamba yakabatana neakaundi yako yeFacebook, iwe unozokwanisa kuona magadzirirwo anoitwa neshamwari dzako, izvo zvinokuwanira iwe zvimwe zvinhu zvaunogona kushandisa mumusha mako.
Osmos HD ndomumwe wemitambo mizhinji iri paPlay Store inogona kuridzwa pamhepo, uye ine vatambi vakawanda yakafanana neyakajairwa mutambo, matiri kutora chinzvimbo chemicroorganism ine donzvo guru rekumedza vamwe verudzi rwayo. kuburikidza neosmosis. Ndipo panobva zita rawo.
Iwo mutambo wakanakira kuzorora, unovaraidza zvakanyanya uye unotopa imwe yeakanakisa mutambo wemitambo yeAroid zvishandiso.
Iyo yekuona chikamu chakanyanya minimalist, iri mukana wekuti magirafu adzokororwe pasina matambudziko paAroid zvishandiso zveakasiyana zvirevo.
Order & Chaos Pamhepo
Mitambo yekutamba neshamwari pasina internet
Iwo mutambo weMMORPG une nhamba huru yevateveri pamwe nezvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa panguva yemutambo. Zvinogoneka kutamba wega kana uchida, kunyangwe iyo inonyanya kunakidza iri yevazhinji modhi yekutamba neshamwari.
Munguva yekuvandudzwa kwemutambo unogona kuwana nhamba huru yevatambi, anopfuura chiuru mamishoni ekuita, anokwira uye anosvika mashanu akasiyana mijaho iripo yekutamba.
Mutambo uyu unosanganisira PVP modhi inowanikwa pamwe neiyo cooperative mode, chimwe chinhu chinotarisirwa kubva kuMMO mutambo wakadai.
Iwo mutambo wekunakidzwa kwemaawa nemazuva mazhinji, saka iwe uchasangana nenyika yakakura yevatambi paunenge uchifambira mberi nechikamu ichi chemitambo yepamhepo yemafoni eAndroid.
yakanakisa mitambo yeandroid 2
Pakati pevaviri-vatambi mitambo yeAroid online tinowana Ingress, mutambo wakanyorwa seakarongeka augmented chokwadi, uye izvo zvinoitika kwete chete pachiratidziro chidiki, asi munyika chaiyo.
Kushanda kwayo kunopihwa nekuvapo kwemaportals pasirese, ayo anofanirwa kutorwa kana kudzivirirwa nedivi rakasarudzwa: Resistance kana Kuvhenekerwa. Mutambo uyu wakabudirira, zvekuti nharaunda yepasi rose yakatovhurwa panoungana vateveri vemutambo.
Iwe uchawana ma portals kwese kwese, chero iwe uchigara pedyo nemataundi nemaguta. Ingress inozadza mazuva ako nekunakidzwa nekuwedzera kuti iwe uchafanira kusiya imba yako kunotamba, izvo zvinobatsira kuita basa remuviri, chimwe chinhu chakafanana nePokémon GO mutambo.
pamhepo multiplayer mitambo Android
Basa rako mumutambo uyu wevazhinji kuyedza kuve mutyairi ane tarenda munzira kuti uwane mapoinzi. Pano iwe hausi kuzove chikamu chechero nhangemutange uye hauzofanirwe kubondera mune dzimwe mota kana vanhu. Chinangwa chako chete chichava chekutyaira mota yako nemazvo nekumhanya kuzere mumugwagwa mukuru.
Iyo mienzaniso yakawanda haina kubvumidzwa semamwe mitambo, sezvo iwe uchave uchikwanisa kuwana nzvimbo dzekutungamira uye zvikwangwani. Chinangwa chikuru ndechekuedza kurova mutambo, chimwe chinhu chinogona kuodza mwoyo paunopedza nguva yakawanda. Pamusoro pekunakidzwa kwese kwaunounza, mutambo uyu ndewemahara.
CSR Mujaho uri pakati pezvisarudzo zvepamusoro kana zvasvika pamitambo yepamhepo yekutamba neshamwari, ichiunganidza anopfuura mamirioni makumi mashanu ekuisa kusvika parizvino.
CSR Mujaho mutambo wemujaho wemotokari umo iwe uchafanirwa kuyera tarenda rako uchipesana nehungwaru hwekunyepedzera uye uchipesana nevamwe vatambi vazhinji vanozodawo kuhwina, munhangemutange yekota mamaira kana hafu yemaira.
Gadzirira kunakidzwa nemushandirapamwe wakakura uye unokurumidza, pamwe nekuvandudzwa kwese uye zvekuwedzera izvo vagadziri vanoramba vachiita nekuvandudza kwega kwega.
Kana iwe ukanyura mune yevazhinji modhi uchafanirwa kuzviyera iwe uchipikisana nevamwe vatambi pamhepo uye wowana mibairo yauchazokwanisa kushandisa muCSR Racing mushandirapamwe modhi. Chinhu chakanaka nezvemutambo uyu ndechekuti iwe unogara uchiwana online vanopikisa kuti vatambe.
Asingagumi Varwi 2
Mitambo yepamhepo neshamwari
Eternity Warriors 2 mumwe mutambo unoshanda wakafanana neDungeon Hunter. Iyo ine PVP uye online multiplayer modhi inobvumidza iwe kukwikwidza online kana kutamba neshamwari kana uchida.
Iwo magiraidhi ari pamusoro peavhareji uye kuita kwemutambo kunowanzo kurongedzerwa zvakanaka uye kwakayerwa pamusoro pakati pevatambi vemafoni akawanda. Kutamba mutambo uyu haufanirwe kubhadhara chero chinhu, sezvo chiri chemahara zvachose, kunyangwe zvinosanganisira zvakajairwa kutenga izvo isu tese tinoziva mukati memutambo, izvo zvinogona kunge zvichikutsamwisa, kunyangwe zvisiri zvakanyanya.
Pasinei neizvi, kuyera kwemutambo kwakanaka kwazvo, saka zvinogona kugumiswa kuti sarudzo yekutenga mukati memutambo hachisi chinhu chinokuvadza zvakanyanya ruzivo rwemitambo kana maonero ane vatambi nezvazvo.
Android mitambo yevazhinji
HellFire: Kushevedzwa kunogona kutorwa semusanganiswa weYu-Gi-Oh uye Mashiripiti: Iyo Kuunganidza mitambo.
Mumutambo uyu unofanirwa kushandisa makadhi kudaidza zvisikwa zvakasiyana siyana zvaunogona kuvandudza uye zvauchazoshandisa kupinda mukurwa nezvimwe zvisikwa.
Iyo yevazhinji modhi ndiyo yakajairika iyo mutambo werudzi urwu unogona kupa, waunogona kutamba nawo munguva chaiyo nevamwe vanhu.
Nekudaro, timu yekuvandudza mutambo yaida kuita chimwe chinhu chakasiyana, ichipa mukana wekutora chikamu muzviitiko zvepamoyo kuitira kuwedzera kupenya kumutambo. Mutambo uyu parizvino une mukurumbira, saka hapazove nekukanganisa kukuru kuwana mukwikwidzi zviri nyore.
Call of Champions mutambo apo iwe nevamwe vaviri vaunoshanda navo muchasangana nevakwikwidzi vatatu mukurwa uye mumhirizhonga yakafanana. Iwe uchave wakashongedzerwa neOrb yeRufu kufamba uye unogona kuishandisa kuparadza shongwe dzevavengi ivo vachiedza kukuitira izvo chaizvo.
Anokunda ndiye wekutanga kuparadza shongwe dzese dzevavengi. Mechi dzinotora maminetsi mashanu uye dzinogona kuridzwa kakawanda sezvaunoda. Kune mamwe mavara anogona kuvhurwa (kana kutengwa nemari chaiyo). Kune zvakare nzira yehungwaru yemabhoti inotsiva vatambi vevanhu vanosiya mutambo, saka mitambo haiperi. Icho chiitiko chikuru chaunogona kurwa pamwe chete neshamwari dzako mumutambo uyu wevazhinji.
Asphalt 8: kuenda neherikoputa
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 1
Asphalt 8 ndeimwe yeakanakisa mota yemujaho mitambo ye Android. Mutambo uyu une yakanakisa magiraidhi uye inoshamisa mitambo yemotokari. Iwe unogona kumhanyisa uchitenderedza zviteshi zvakasiyana uye mateki, kufamba nemhepo, uye kuita timu stunts.
Airborne inopa vatambi vakawanda mutambo modhi ine vanosvika 8 vanopikisa. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kutamba mutambo uyu kuburikidza neLAN kubatana neshamwari dzako. Kune zvakare zvipoko zvinonetsa apo shamwari dzinogona kudenha nguva yavo yakanakisa panjanji uye kukwikwidza chipoko chako pasina iwe kuti unge uripo. Mutambo uyu unowanikwa mahara paGoogle Play.
Rwisana pakati pamarudzi
Clash of Clans zviripachena ndeyepaiyi runyorwa nekuti ndiyo yakanakisa-kuhwina-kuhwina-kuhwina-kuhwina-kuhwina-kuhwina kwepamhepo kwevazhinji Android mutambo wa2013. Iwo evazhinji online online zano mutambo unobvumidza iwe kuvaka musha, kusimudza uto uye kurwisa vavengi kuti vatore kutonga. . Vavengi vanogara vachibatanidzwa nevamwe vanhu.
Mutambo uripo unongowanikwa mune yevazhinji modhi. Iwe unogona kujoinha mapoka neshamwari kana vanhu vasina kurongeka kuti vabatsire mumwe uye unogara uchirwisa vamwe vanhu. Iyo muchinjika-chikuva, saka inowanikwawo kune iOS.
Clash of Clans yaive uye inoramba iri imwe yeanonyanya kufarirwa mitambo yepamhepo ye Android mumakore achangopfuura. Mutambo uyu uzere nezviitwa zvemukati, saka unozopedza maawa, mazuva nemwedzi uchiutamba.
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 10
Kana iwe uchida mitambo yemazwi, saka iwe unofanirwa kupa Shoko Chums kuyedza. Mutambo uyu wakaitwa zvakanaka nemagiraidhi anonakidza uye ruzha, uye iyo online yevazhinji modhi yakafanana neyakawanda, inopa mavara anogoneka, duramazwi rakazara, uye vimbiso yenguva yakanaka neshamwari.
Mutambo uyu unoumbwa nevatambi 3-4 uye unogona kutambwa uchipesana neshamwari dzako, vapikisi vausingazivi kana Chumbots.
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 8
Uyu mutambo wekupindwa muropa wakagadzirirwa vateveri vebasketball, wave mumwe wepamusoro akatemerwa uye akadhawunirodha evazhinji mitambo yebasketball paGoogle Play. Iwo magiraidhi anoshamisa chaizvo uye kune modhi dzemitambo kwaunogona kuratidza hunyanzvi hwako hwebasketball.
Mutambo uyu wakazadzwa nezvinhu zvakawanda kuvaka hunhu hwakanaka, senge vatambi, basketballs, yunifomu, uye munda. Iwe uchawana bhodhi rezvibodzwa rinokuratidza iwe nhamba dzemutambo.
Mutambo uyu unopa maviri modes: single uye multiplayer. Online multiplayer inobvumidza iwe kutamba neshamwari uye nevamwe vatambi chaivo. Kana iwe uri basketball fan, iwe zvechokwadi uchanakidzwa neyakanakisa basketball chiitiko neChaiyo Basketball.
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 4
Mujaho weGT 2 ndomumwe weakanakisa emujaho mitambo yakagadziriswa neGameloft. Zvakafanana neAsphlat 8, GT Racing 2 inopa mazana emota uye mateki ane customizations. Asi mutambo uyu une simba guru rechokwadi, uye unodzokororwa mumutambo nechinhu chiri padyo kune echokwadi simba.
Iyo ine super realistic 3D shanduro dze71 chaidzo marezinesi emota pamateki gumi nematatu, pamwe nemamiriro ekunze uye nemazuva akasiyana sezvaunoyedza hunyanzvi hwako, pamwe nevatambi vakawanda. Mune multiplayer mode, unogona kukwikwidza shamwari dzako kana vatambi chaivo kubva kumativi ese epasi kuburikidza neInternet.
Mugomba Hunter 5
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 3
Dungeon Hunter 5 chikamu chechishanu muGameloft yakakurumbira chiitiko nhepfenyuro, uye zvakare mutambo wevazhinji. Iyo inouya neanoshamisa magiraidhi, epic storyline, uye zvakasiyana-siyana zvakavanzika uye cheats yemutambo makanika. Seyazvino inoteedzana muDungeon Hunter nhevedzano, inosuma makomba matsva, hunyanzvi, uye masisitimu ekugadzira, pamwe neiyo chombo kusimudzira system.
Pamusoro peiyo solo adventure, mutambo zvakare une yakakurumbira online evatambi vakawanda chikamu chinosanganisira cooperative mode kwaunogona kutamba nevamwe vanhu, PVP modhi yekutarisana nevamwe vatambi, uye zvakare zvinokwanisika kuvaka timu uye kukwikwidza mukurwa.
Dungeon Hunter 5 mutambo weMMORPG maunofanirwa kukudziridza hunhu hwakazvipira kuvhima mibairo yegoridhe, kufambira mberi pakati pemisheni dzakasiyana uye nemukana wekutamba nevamwe vanhu. Mutambo uyu unoumbwa neanopfuura 70 mishoni, umo iwe uchanyura iwe pachako mumamiriro akasiyana ane huwandu hukuru hwezvinhu zvekuferefeta nekutsvaga, uye misheni inofanirwa kupedzwa kuti uenderere mberi.
Android mitambo yepamhepo
Iwo mutambo wakanakira mazera ese, uye unosanganisirawo vhezheni yemuviri, muchimiro chebhodhi mutambo. Iye zvino zvakare inowanikwa kune Android.
Chaizvoizvo, Kuputika Kittens mutambo wemakadhi uri nyore kwazvo kutamba, umo kubudirira kwemutambi wega wega kunoenderana nerombo ravo nemukana, zvinhu zviviri zvakakosha mumutambo uyu. Chinangwa ndechekudzivirira kubatwa nekadhi dema, rauchaputika naro uye nekudaro kugumisa kutora kwako kutora chikamu mumutambo wevazhinji wepamhepo.
Pakutanga, chirongwa chemutambo uyu chakabudiswa pane Kickstarter peji, kubva kwayakakwanisa kuunganidza mari yakakwana kuti igadziriswe uye ichibva yatangwa, ichikwidza mari inosvika 8.782.571 madhora uye kuwana rekodhi yevatengi pachikuva.
Iwo mutambo weArcade-style yekupfura waifanirwa kuve chikamu chedu runyorwa rwemitambo yemafoni kutamba neshamwari, kwaunofanirwa kurwisa vasingaverengeki vanopikisa, kusanganisira mabhosi akaipa, edza kutora zvombo uye kukunda mishoni dzakasiyana dzinounzwa.
Iwe uchafanirwa kunyura murima rakadzika apo iwe uchazviwana uri mugomba rizere nekutyisidzira, pamwe nezvombo. Ikoko iwe unowana zvinopfuura zana zvombo zvakagadzirira kushandiswa kurwisa zvikara zvaunosangana nazvo murima.
Mutsara wenyaya hauna kudzika kwakawanda, kunyanya kutarisa kuwana zvombo, kukunda vavengi uye kunakidzwa nenhanho yega yega yechiito icho mutambo uyu unopa kutamba vari vaviri pa Android. Iyo yakakura yekuwedzera: ivo vanokupa isina muganho ammo yekushandisa nezvombo zvako.
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 2
Blitz Brigade mutambo wevazhinji wepamhepo FPS (Munhu Wekutanga Shooter) wakafanana neakakurumbira PC kupfura mitambo Team Fortress 2 kana Battlefield Heroes. Mutambo uyu une mavara emakatuni 3D magiraidhi uye ruzha rukuru.
MuBlitz Brigade unogona kutora chikamu muhondo dzemahara dzepamhepo dzevazhinji nevatambi vanosvika gumi nevaviri uye sarudza kuve chikamu cheimwe yemakirasi mashanu akasiyana: musoja, medic, pfuti, sneak uye markman.
Mumwe nomumwe wavo ane midziyo yakasiyana-siyana uye maitiro anokosha, asi iwe unofanira kuazarura, kunze kwe "musoja", anouya kwauri kubva pakutanga. Unogona kushandisa 3 dzakasiyana mota muhondo uye kurwa nezvinopfuura zana zvine simba zvombo. Blitz Brigade ndiyo yakanakisa uye hombe nhandare yehondo yeandroid nhasi. Dhawunirodha Blitz squad yemahara izvozvi uye unakirwe nemutambo mukuru wekupfura wepamhepo wevazhinji pane chako Android kifaa.
Android Multiplayer Games: Gun Bros Multiplayer
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 5
Pfuti Bros Multiplayer mutambo wekupfura wakapetwa senge wekirasi Contra. Mumutambo, iwe uchafanirwa kufamba kubva kupasi kuenda kupasi kuti usunungure pasi kubva kune vanopinda nechisimba. Kune hombe yezvombo zvekusarudza kubva uye mutambo une inoshamisa interface.
Sezvinoratidzwa nezita racho, mutambo uyu wakagadzirirwa kutambwa nevamwe vatambi. Pane zvakare sarudzo yekuwedzera yaunofarira mutambi kune yako shamwari runyorwa kuitira kuti iwe ugone kutamba mese kana mese muri online.
Kumukira 2: Vatambi vakawanda
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 9
Re-Volt 2: Multiplayer iri nyore mujaho wemota mutambo unokuita kuti upindwe muropa. Iko kudzokororwa kweiyo yekare Re-Volt 2, pamwe nekuwedzera kweiyo online multiplayer mode. Muichi chinyorwa chitsva cheRe-Volt 2, mutambi anogona kutarisana nevatambi vana kubva kupi zvako pasirese.
Kune akati wandei emhando dzemota dzaunogona kusarudza kubva, dzinosanganisira mota dzemujaho, mota dzemafomula, uye kunyange marori ezvikara. Unogona kugadzirisa mota idzi dzese zvinoenderana nezvaunoda.
Munguva yemijaho, vatambi vanogona kushandisa marudzi akasiyana-siyana emagetsi senge makomba, mafuta, mabharumu emvura, nezvimwe. Kune 4 mutambo modes uye anopfuura 264 matanho. Muchikamu chega chega, iwe unowana akasiyana mapikicha uye madhirowa apo iwe uchafanirwa kukwikwidza kurwisa chero komputa inodzorwa kana vanhu vanopikisa.
Re-Volt 2: Multiplayer yakanakisa 3D mujaho mutambo une magiraidhi makuru uye ine chokwadi chekuchengeta iwe uchivaraidzwa kwemaawa.
Mashoko Matsva Neshamwari
Yemahara mitambo yevazhinji yepamhepo ye Android 6
Mazwi Matsva Neshamwari mutambo wemahara weshoko wakagadzirwa naZynga aine Shamwari (yaimbova Newtoy, Inc.). Zvakafanana neiyo classic board game Scrabble, kwaunofanirwa kutamba uchipikisana neanopikisa uye woisa mazwi pabhodhi kubva pakusarudzwa kwemabhii manomwe pasherufu yako.
Vatambi vanosvika makumi maviri vanogona kutamba panguva imwe chete ne push notices kuti vazivise vatambi kana yava nguva yavo. Unogona kukoka shamwari dzako kuti dzitambe ipapo kuburikidza neFacebook, Twitter kana zvisina tsarukano mupikisi mutambo.
Iwo mutambo wekutaura, saka kana iwe uchinzwa kuda kutaura nevamwe vako vatambi, saka unogona kuzviita kuburikidza nechat sarudzo.
mitambo yekurodha mahara
QuizUp mutambo wemibvunzo unobvumidza iwe kukwikwidza neshamwari dzako kana vamwe vatambi vanobva kutenderera pasirese, mumitambo yakasiyana-siyana yetrivia. Pamberi pemutambo wega wega unobatanidzwa nemunhu chaiye uye vaviri vanoenda kumusoro mumakwikwi.
Kune anopfuura mazana mashanu nemakumi mashanu misoro yekusarudza kubva, kubva kuhunyanzvi kusvika kunhoroondo, dzidzo kune bhizinesi, uye kunyangwe kutamba uye Android, saka haufanirwe kunetseka nezvekupererwa nemibvunzo kuti uedze ruzivo rwako.
Kunze kwechikamu chemibvunzo, unogona kutaura nezve nyaya dzaunofarira mumaforamu enharaunda, kutevera vanhu vanofarira zvakafanana, kuwana budiriro, nezvimwe. Paunenge uchinge wapinda mumutambo uye wotanga kushandisa ese aya maficha, mutambo wacho unopa zvakati wandei ruzivo. Kune zvakare menyu yekuseta kwaunogona kutamba uchitenderedza nezvinhu zvakaita seziviso nemanzwi.
6 Inotora mutambo wakasarudzika wekadhi wakafemerwa neane mukurumbira bhodhi mutambo injiniya Wolfgang Kramer. Mamiriro acho ari nyore. Iwe uchapihwa makadhi neBuffalo Heads pavari uye chinangwa ndechekuwana mashoma maBuffaloes sezvinobvira panguva iyo mutambo wapera.
Inotsigira vatambi vakawanda vemuno kusvika vatambi vana uye yakanakira vana nevakuru vemazera mazhinji. Inoitwa pamutengo we $ 1.99 iyo isiri yakawanda asi unogona kuiedza mukati meawa imwe yekudzosera nguva kuti uve nechokwadi chekuti unoifarira!
Chiito chevatambi 2-4
Iyo yakanakisa mitambo yevazhinji
Chiito Chevatambi 2-4 idiki yekumberi kwezita reapp, asi zvirinani inoita izvo zvinonzi nezita rayo. Iwo chaiwo nhevedzano yemitambo mitatu uye yese inogona kuridzwa nevatambi vaviri kusvika vana venzvimbo. Kune bhora rebhora renhabvu kwaunogona kutora chikamu mumutambo wenhabvu, kurwa kwetangi inova mupfuri wepamusoro pasi, uye mujaho wemotokari zvinova ndizvo zvazvinonzwika.
Hapana kana chimwe chazvo chakanyanya kushamisa, asi pamwe chete vanogadzira dzimwe sarudzo munyika ine nzara isina vatambi vakawanda. Izvo zvakare zvemahara kudhawunirodha ne-mu-app kutenga sarudzo, saka unogona kuzviedza usati washandisa chero mari.
BADLAND ipuratifomu yemuchadenga yakatora nyika nedutu payakatanga kuburitswa. Rudzi rwayo rwakanyarara uye chimiro chakatwasuka chakabatsira BADLAND kuve inorova nevatsoropodzi. Sezvazvinoitika, ine zvakare ine isina online multiplayer modhi.
Iwe unogona kutamba co-op nenzira imwechete yaunogona kutamba Super Mario Bros vatambi vakawanda, uko vatambi vanochinjana kuburikidza nemazinga. Iwe unogona zvakare kukwikwidza padanho uye woona kana mumwe munhu achigona kuenda kure kana kureba kupfuura iwe. Yakagadziridzwa kakawanda kubva payakatangwa nematanho matsva uye inogona kuyedzwa mahara usati watenga iyo yakazara vhezheni.
Battle Slimes mutambo wepamhepo wevazhinji vakawanda, kwaunotamba sediki Slimes uchikwikwidza nevamwe. Unogona kutamba uchipesana neCPU kana nevatambi vanosvika vana munharaunda. Inotamba senge yakareruka Super Smash Bros kwaunongofanira kurova vanopikisa.
Iyo inoratidzira imwe-yekubata zvidhiraivho iyo inokutendera iwe kuti usvetuke apo hunhu hwako hunofamba uye kupfura vari voga. Yemahara yekutamba pasina yekuwedzera mu-app kutenga, yakanakira vana, uye haina kushata.
Dzimwe nguva zvakanaka kudzokera kumakirasi uye kana uchifarira mutambo wekare wechesi, Chess Yemahara ndiyo app yekuve nayo. Iwo magiraidhi ari nyore, asi mutambo wacho wakasimba.
Online multiplayer inogona kuridzwa, pamwe nenhamba yemutambo mumwe chete chess. Iyo yemahara isina mu-app kutenga uye inouya nesere chessboards, manomwe seti ezvimedu, uye toni yezvimiro kuita kuti chiitiko chinakidze.
Edge yeNyika mutambo unotevedzera curvature. Chinangwa ndechekutanga ngarava yako uye kuitora sepedyo kumucheto kwenyika sezvinobvira. Kana kuti iwe unogona kuvhura ngarava dzako kune dzimwe ngarava uye mune imwe yakadonha swoop vandudza yako mikana.
Iyo inoratidzira kunze kwepamhepo vatambi vakawanda uye unogona kutamba semumwe wevakuru vashanu, mumwe nemumwe aine yavo seti yehunyanzvi. Zvakanaka kupfuudza mutambo neshamwari uye yakanakira vana nevakuru.
Mitambo yekutamba online neshamwari: Vanyoro!
Gentelmen! ihondo yeArcade-to-head apo iwe nemumwe munhu munofanirwa kukwikwidza kuti murove mumwe. Iwe wega unotamba mumwe wevaviri mavara, mumwe nemumwe aine kugona kwake, apo iwe uchitenderera uchitenderedza skrini uchiedza kudzikisa mumwe munhu.
Inobvumira vanhu vaviri kutamba pachiratidziro chimwe panguva imwe chete uye izvi zvinokurudzirwa zvakanyanya kune vanhu vane mahwendefa kunyangwe ichiridzwa pamafoni makuru zvakare. Inokurumidza uye yakashatirwa.
Glow Hockey 2 ndeye chaiyo yemhepo hockey tafura ine mavara neon magiraidhi. Kana iwe wakambotamba mhepo hockey mutambo muhupenyu hwako saka iwe unotoziva mashandiro anoita Glow Hockey 2.
Iwe unodzora neon denderedzwa uye woishandisa kurova bhora rekuda kupinda muchinangwa chemumwe munhu vasati vakuvharisa. Iyo ine panguva imwe chete yevatambi vakawanda saka inoridzwa zvakanyanya pamapiritsi kana, zvirinani, hombe nhare. Zviri nyore asi zvinotora kunakidzwa kweakanaka air hockey makwikwi.
Minecraft mutambo unozivikanwa zvakanyanya waunogona kutamba kumba neshamwari dzako. Ikozvino yave tekinoroji yevazhinji vatambi, asi kwete kunze kweinternet vatambi vakawanda.
Shamwari dzako dzinozoda kubatana kune yako yemuno yeWiFi router (hapana chikonzero chekubatanidza kuwebhu, kungo batanidza router inokwana) kuti munhu wese apinde mumutambo wako.
Kubva panguva ino iwe unokwanisa kuvaka zvinhu, zvinhu zvine chekuita nemigodhi, kutamba, uye neimwe nzira kunakidzwa. Iyo yakati rebei, asi ndeye Minecraft uye yakakosha.
Iwo mutambo usingapere waunofanirwa kugara uchigadzira. Minecraft yaive imwe yemitambo yakakurumbira makore mashoma apfuura, uye nanhasi.
Yemahara mitambo yevazhinji
Vazhinji vedu takapedza manheru asingaverengeki takagara pamberi peTV neshamwari tichitamba NBA Jam kuma1990s, uye zvino togona kuzviita zvakare.
NBA Jam yaive imwe yemitambo yekutanga kutsigira zviri pamutemo Android TV uye yemuno vatambi vakawanda vanogona kuridzwa pamusoro peWiFi yemuno (senge Minecraft) kana paBluetooth kana usina router iripo. Iwo mutambo unonakidza unotamba nekukurumidza uye wakasununguka nemitemo yeNBA uye zvakanyanya kupfuura zvese, hapana kutsva mu-app kutenga kunodiwa!
Unofa Kombat X
mitambo yevazhinji yepamhepo
Mortal Kombat X mutambo unongobatanidzwa chete nekurwa. Kana iwe uchida kutamba mutambo wekurwisa ropa rechisimba munguva yako yakasununguka, mutambo uyu unofanirwa kunge uri pane yako runyorwa.
Mortal Kombat X yakatanga kugadzirirwa maconsoles asi gare gare, nekuda kwekuzivikanwa kwayo, yakaburitswa nharembozha. Mutambo uyu ndewekirasi yemitambo yevazhinji uye zvakare wekutamba uchipesana nekombuta.
Hunhu hwakavakirwa pane iconic varwi kubva kufranchise. Iwe unogona zvakare kuenda kune mumwe nemumwe nevatambi vanobva kumativi ese enyika. Iwo mutambo une yakakwira graphic mhando iyo inoita kuti iwe uonekwe uye haugone kumira kuitamba. Hunhu hwega hwega hune mamwe mafambiro akakosha uye zvakare chiratidzo chavo chekufa uye X-Rays. Saka gadzirira kurova gehena somumwe munhu. Unogona kudhawunirodha iyi yevazhinji mutambo paki pa Play Store.
mitambo yemahara yevazhinji
Kutamba mabhiriyoni edhijitari kwagara kuchinakidza uye unogona kuzviita paAndroid nePool Break Pro.Mutambo uyu unopa misiyano yakawanda pamabhiriyadhi ekare, pamwe nemimwe mitambo yetsvimbo nebhora yakaita seCarrom, Crokinole neSnooker.
Kazhinji, kune mitambo ingangoita gumi nemaviri yakasiyana yekutamba. Inotsigira pass-and-play multiplayer saka iwe unotora nguva ipapo mumwe munhu anotora mudziyo otora yako. Zvakare online vakawanda vatambi kuti ugone kupikisa vamwe kunyangwe iwe uri wega. Iwo mutambo wakasimba chaizvo nemutengo wakaderera.
Hondo yeGungwa mutsauko weiyo yekare Gungwa Hondo kana Battleship board mutambo. Sezvaungafungidzira, zvinoreva kuti zviri nyore kudzidza uye zvakanakira vana nevakuru.
Iwo magiraidhi akadhonzwa nemaoko zvinova zvinobata zvakanaka uye kune zvimwe zvakasiyana uye zvishandiso zvitsva kuita kuti mutambo unakidze uye usiyane newakatanga, ngarava yehondo. Unogona kushandisa pass-and-play style yevazhinji kana uchingove nemudziyo mumwe chete kana kubatanidza neBluetooth wotamba saizvozvo. Mukuwedzera, ndeye mahara zvachose.
Spaceteam mutambo webhodhi wakafanana naSimon Says. Kana yave nguva yako, unofanira kutaura chimwe chinhu chinosekesa uye chenhema-sainzi kutsanangura chiito chinofanira kuitwa nevanhu. Pane madhiri uye switch pamudziyo uye ungangofanira kushandisa zvinhu zvakaita segyroscope zvakare.
Wese munhu ari mumutambo anofanirwa kuve neayo Android uye Apple zvishandiso uye akabatana kune imwecheteyo WiFi network (hapana webhu inodiwa, asi router yekuwana ndiyo). Iwe unongorasikirwa nemutambo kana chikepe chako chinoputika.
Makonye 2: Amagedhoni
Worms mutambo wekare waunorwisa muvengi kuti uuraye makonye avo ese vasati vawana mukana wekuuraya wako. Kune matani ezvombo zvisina musoro, mazano, uye zvimwe zvakawanda zvinoitika mumatanho ane mavara.
Iwo mutambo unonakidza une mutengo wakaderera tag, uye hongu ndeyevazhinji vemunharaunda vachishandisa nzira yekupasa-uye-kutamba. Pamazinga epamusoro evatambi vakawanda, pane zvimwe zvakawanda zvekuita kuti dhora rako risazoparara nemutambo uyu.
Modern Combat 5: kudzima magetsi, somuenzaniso
Yemazuvano Combat 5: Blackout ndeimwe yeakanakisa munhu wekutanga kupfura mitambo yemhando. Icho chikamu che "Modern Combat Series", chikamu chechishanu chemutambo wakateedzana. Vakatodhawunirodwa kanoda kusvika 50 miriyoni nevashandisi.
Mutambo uyu uchaita kuti iwe uwane kunakidzwa kweKufona kweDuty uye kunakidzwa kweBattlefield. Ndiyo imwe yemitambo inoshamisa zvikuru; iyo yepamhepo yevazhinji mutambo wemitambo inoshamisa zvakare.
Iwe unogona kubatana neshamwari dzako kuenda kunopesana nechikwata chemuvengi. Mutambo uyu wakanyanya hunyanzvi uye uchafanirwa kuisa pasi maitiro ako ehondo. Mabhomba, magirinedhi uye zvinoputika zvakakosha. Iwe unogona zvakare kutaura nechikwata chako uye nevamwe vatambi muGlobal uye squad chat. Mutambo wacho wakanyanya uye unopindwa muropa. Unogona kudhawunirodha mutambo uyu kubva kuPlay Store.
BombSquad mutambo unonakidza wepamhepo wevazhinji kwaunoshandisa mabhomba kuputika shamwari dzako. Iine emahara mavhezheni eAroid, mutambo uyu unoyeuchidza Bomberman, asi iine inonakidza 3D mifananidzo uye isina yakaoma mazes kana mirairo. Zvisina kujairika, BombSquad inobata kufarira kwechero mutambi nekureruka kwayo uye kutarisa kune vakawanda.
Mutambo uyu une modhi yemushandirapamwe, inofanirwa kuhwina 'matiketi' kuti ukwanise kutamba online uchipokana nevamwe vatambi. Mune yemushandirapamwe modhi, iwe uchafanirwa kupona akati wandei mafungu evavengi anodzorwa nemutambo.
Iyo mirairo iri nyore: kuruboshwe rwechidzitiro, iyo character drive control. Kudivi rerudyi, kune mabhatani mana anoshandiswa zvakateerana kuti: kubaya, kutora chimwe chinhu, kukanda bhomba kana kusvetuka. Kune akati wandei marudzi emabhomba uye anogona chete kunhongwa panguva yemachisi.
Chikumbiro chakareruka chakanakira kutamba muboka neshamwari. BombSquad inomira pachena nekuda kwekusada online mode. Unogona kutamba neshamwari dzako, asi pasina internet. Iwe unongo pinda muWifi modhi yemutambo kuti "kutambira" mutambo. Nekugona kwevatambi vanosvika vasere mumutambo mumwe chete, BombSquad ndiwo mutambo unokurudzirwa kune vanoda kunakidzwa kwevazhinji.
Mitambo yekutamba neshamwari dzeAndroid
Kutamba mitambo yemavhidhiyo pamhepo ndiyo nzira yakanakisa yekutamba vatambi vakawanda. Iwe une mukana wekutamba nevanhu vanobva kumativi ese enyika chero nguva yezuva.
Zvisinei, havasi vose vane webhutaneti yakasimba nguva dzose, uye dzimwe nguva unongoda kutamba nevanhu vagere pedyo newe panzvimbo yevanhu vari kune imwe nyika. Kana izvo zvichiita sechimwe chinhu chauri kutsvaga, heino yakanakisa yemuno vatambi vakawanda mitambo ye Android.
Kana iwe uchifunga kuti chero mikuru yemuno yevazhinji mitambo yeAroid isipo pane iyi runyorwa, ndizivise mune zvakataurwa kuti ndivawedzere kune iyi mega sarudzo.
Zvakanakisa Zvishandiso zveKuona Live TV Channels uye mafirimu
Snapdragon 8+ Gen 1 ndiyo Qualcomm yakanyanya simba chip
Tags: Androidmitambo yakawanda
Diablo Immortal: Maitiro ekutanga kuidhawunirodha paPC
Ndezvipi zvinhu zvakakosha zvemutambi?
Usakanganwa kuziva yakanakisa mitambo yemavhidhiyo yegore
Hapana Denga reMunhu rinowana Revhiatani Expedition, kuwedzera kwayo kwechinomwe kwemahara